Qalabkani wuxuu isticmaalaa habka dhabta ah ee loo yaqaan 'PCR fluorescent PCR' si loo ogaado RNA ee fayraska 'Pseudorabies virus' (gB gen) '(PRV) ee qalabka cudurada unugyada sida qumanka, qanjidhada qanjirada iyo beeryarada iyo qalabka cudurrada dareeraha ah sida tallaalka iyo dhiigga doofaarrada.
Colcher O157: H7 (E.coli O157: H7) waa bakteeriya gram-negative ah oo ka tirsan genus Enterobacteriaceae, oo soo saarta tiro badan oo sunta Vero ah.
Qalabka Kala-ogaanshaha Norovirus (GⅠ) RT-PCR
Waxay ku habboon tahay ogaanshaha Norovirus (GⅠ) kalluunka qolofta leh, khudradda ceyriinka ah iyo miraha, biyaha, saxarada, matagga iyo tijaabooyinka kale. Soo saarista Nucleic acid waa in lagu sameeyaa xirmada soo saarista nukleerka acid ama habka tooska ah ee loo yaqaan 'pyrolysis' iyadoo loo eegayo noocyada noocyada noocyada kala duwan
Qalabka Laydhka PCR ee Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes waa microbacterium gram-positive ah oo kori kara inta u dhexeysa 4 ℃ iyo 45 ℃. Waa mid ka mid ah cudurada ugu waaweyn ee khatarta ku ah caafimaadka aadanaha ee cuntada qaboojiyaha.
Qalabka Kala-ogaanshaha Norovirus (GⅡ) RT-PCR
Waxay ku habboon tahay ogaanshaha Norovirus (GⅡ) kalluunka qolofta leh, khudradda ceyriinka ah iyo miraha, biyaha, saxarada, matagga iyo tijaabooyinka kale.
Qalabka Selmonella PCR Ogaanshaha
Salmonella waxaa iska leh Enterobacteriaceae iyo Gram-negative enterobacteria. Salmonella waa cudur caan ah oo cunnada ku dhasha waxayna ku jirtaa kaalinta koowaad ee sumowga bakteeriyada cuntada.
Qalabka Shidaalka PCR ee Shigella
Shigella waa nooc ka mid ah gravis-negative brevis bacilli, oo ka tirsan cudurada ku dhaca xiidmaha, iyo cudurka ugu badan ee keena cudurka dabaysha ee ku dhaca jirka.
Qalabka baaritaanka PCR ee loo yaqaan 'Staphylococcus aureus'
Staphylococcus aureus waxaa iska leh genus Staphylococcus waana bakteeriya-gram-positive ah. Waa shey caan ku ah cunno-wadayaasha cudurada keena soosaarida enterotoxins isla markaana sababi kara sumowga cuntada.
Qalabka Qalabka Ogaanshaha PCR ee Vibrio parahaemolyticus
Vibrio Parahemolyticus (oo sidoo kale loo yaqaan Halophile Vibrio Parahemolyticus) waa Gram-negative polymorphic bacillus ama Vibrio Parahemolyticus. Oo ay ku soo biiraan bilowga ba'an, calool xanuun, matag, shuban iyo saxarada biyaha leh oo ah astaamaha caafimaad ee ugu weyn.